သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းမွန်ကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
မွန် (မြန်မာပြည်): မွန်ပြည်နယ်မှသင်၏ကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံနားလည်ခြင်း
မွန်ကလေးများချောင်းဆုံမြို့နယ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင်မွန်အမျိုးသားနေ့စဉ်အတွင်းမိမိတို့၏အမျိုးသားရေးစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်. ဧရာဝတီ / ဝီ Weng နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ.
မြန်မာပြည် (မြန်မာ) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်, 1950 ကတည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိနှိပ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခ. မြန်မာနိုင်ငံကျော်ပါဝင်သည် 100 ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများ, အဆိုပါလူသိအများဆုံးအချို့တို့သည်ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ကရင်, ကရင်နီ, ကချင်, ရှမ်း, ရခိုင် / Rohinyan, နှင့်မွန်ပြည်နယ်. အဆိုပါမွန်မွန်ပြည်နယ်ကနေလာ, ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမွန်လူဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးရှိခဲ့သည်.
မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ပညာရေးကိုအစိုးရကဦးဆောင်သည့်အခြေခံပညာရေးကျောင်းများမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်. အခြေခံပညာရေးကျောင်းကြာ 11 အနှစ်:5မူလတန်းကျောင်းနှစ် (စံမှသူငယ်တန်း 4) နှင့်6အလယ်တန်းပညာရေး၏အနှစ်. ကျောင်းသားများမှာဘွဲ့ရ 16 သို့မဟုတ် 17 အသက်အနှစ်. အစိုးရကပြည်နယ်ကျောင်းများတွင်မူလတန်းအဆင့်ပြီးနောက်မွန်ဘာသာစကားအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်ထားမှုကိုထိန်းသိမ်းထား. ကျောင်းယူနီဖောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်, စာအုပ်များနှင့်အပိုဝန်ဆောင်ခအခမဲ့ပညာရေးကိုရယူသုံးမယ့်အတားအဆီးဖန်တီး. ကျောင်းသားများကိုရုန်းကန်နှင့်အတူမိဘများပြီးနောက်-ကျောင်းမှာအကူအညီတောင်းအပိုကျူရှင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါမည်. ဤသည်အကုန်အကျနှင့်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်အခြေခံအခကြေးငွေမတတ်နိုင်တဲ့သူဆငျးရဲသောမိဘများအတွက်.
မွန်ဒေသများမှထူးခြားသောအမျိုးမျိုးသောကျောင်းမှာစနစ်များလည်းရှိပါတယ်. အမျိုးသားရေးအခြေခံပညာရေးကျောင်းများရှိပါတယ်, မွန်အမျိုးသားကျောင်းများနှင့် '' ရောနှောထားသောကျောင်းများ ''. ရောနှောထားသောကျောင်းများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းအစိုးရအခြေခံပညာရေးကျောင်းများဖြစ်ကြသည်, မွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီနှင့်အတူတစ်ဦးအလွတ်သဘောပူးပေါင်းမှတဆင့်, မွန်ဘာသာစကားတွင်အပိုဆောင်းသင်တန်းများသင်ပေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း.
ပညာရေးကျေးလက်ဒေသလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ဆင်းရဲသားတို့ကိုသားသမီးတို့အဘို့တပိုင်တနိုင်ဖြစ်နေဆဲ. အမြင့်ကျောင်းထွက်နှင့်သယံဇာတသတ်ကျေးလက်မွန်အုပ်စုများအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကြောင်း. ကျေးလက်ကျေးရွာများအတွက်, သူတို့ပညာရေးမူလတန်းကျောင်းပြီးပါကမတိုင်မီထွက်ကျဆင်းသွား left ပြီးမှဖော်ပြထားသူကိုသားသမီးများ၏သုံးပုံတပုံကျော်. နောက်ထပ်တတိယအခကျြခငျြးအောက်ပါမူလတန်းကျောင်းပြီးစီးထွက်ကျဆင်းသွား, အလယ်တန်းပညာရေးမှအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်. သူတို့ပညာရေးထံမှထွက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့သူကျောင်းသားလေးပုံသုံးပုံစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအားအစီရင်ခံတင်ပြ. အနိမ့်ဝင်ငွေကလေးတွေမိသားစုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့အလုပျအတှကျကျောင်းကိုယဇျပူဇျော, ပညာရေး၏ကုန်ကျစရိတ်မဖြစ်နိုင်ပေ, မိသားစုလုပ်အားရွှေ့ပြောင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအားလုံးအချက်များကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးနေကြသည်. အတော်များများကကျေးလက်ကျောင်းများမလုံလောက်သောသင်ကြားရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အတူရုန်းကန်.
မြန်မာပြည်မှာကျင့်သုံးပိုကြီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများအတော်များများကမွန်လူတို့တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်. ဥပမာ, အစဉ်အလာ, မြန်မာမိသားစုအမည်များကိုမရှိဘူး. ဋ္ဌေးမောင်အမည်ရှိသောသူကိုဝင်းဆွေမြင့်ကအမည်ရှိသောဇနီးရှိသည်နှင့်ချိုဇင်နွယ်နှင့်ကိုသန်းမောင်ကအမည်ရှိကလေးနှစ်ယောက်စေခြင်းငှါ,. အမည်များကိုမျှအခြားသူများအားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်; တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဖြစ်ပါသည်. ဗမာအနောကျပိုငျးနိုင်ငံများရှိပုံစံများကိုဖြည့်ဖို့တောင်းကြသောအခါမျိုးရိုးအမည်မရှိခြင်းပြဿနာများကိုဖန်တီးပေး.
ထို့အပွငျ, လူမျိုးစုဗမာလူမျိုးပြင်းထန်သည့်နိုင်ငံရေးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ့ကြုံသောသူမိဘများရှိစေခြင်းငှါသူသည်သင်၏စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများ, သူတို့ကိုယ်တိုင် US မှာမွေးဖွားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအမေရိကန်ရောက်လာသောအခါအလွန်ငယ်ရွယ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း. မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းကြသည် 60%. သို့သော်, အမေရိကန်မြန်မာလူကြီးများပျမ်းမျှဗမာလူမျိုးထက်ပိုပြီးပညာတတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်.
အသက်ကြီးသူကိုလေးစားအရေးကြီးပါတယ်. ထို့ကြောင့်, အသက်အရွယ်နုပျိုသောပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ခန်းတည်းရှိအကြီးအကဲတစ်ဦး၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာထိုင်ကြဘူး, မဟုတ်သလိုသူတို့အကွီးအကဲမြားမှာညွှန်ပြမိမိတို့၏ခြေနှင့်ထိုင်ကြဘူး. ခြေကိုယ်ခန္ဓာ၏အနည်းဆုံးမြတ်သောတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်, နှင့်သင့်လေးစားမှုထိုက်သောသူတစ်ဦးဦးဆီသို့သူတို့ကိုထောက်ပြဖို့မလေးစားသည်. တစ်ခုခုပေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးတို့သည်လက်ကိုသုံးပါ, နှင့်ဆီကတစ်ခုခုလက်ခံရရှိ, အဟောင်းလူတစ်ဦး.
မိတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်သည်အထိမြန်မာ reserved ခံရဖို့လေ့. တဦးတည်းရဲ့ဒေါသကိုဆုံးရှုံးမကောင်းတဲ့အမူအကျင့်နှင့်ဆင်းရဲသောပြုစုပျိုးထောင်၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်.
အဆိုပါမွန်အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းပထမဆုံးလူမျိုးတစ်ဦးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအနည်ထိုင်ဖို့အစောဆုံးတဦးတည်းဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်. မွန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ Theravadin ပွဲတော်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခမ်းအနားပြက္ခဒိန်အတိုင်းလိုက်နာ.
ယေဘုယျအားမြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်, အစဉ်အလာများနှင့်အကောက်ခွန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အပြစ်ကိုခံခြင်းနှင့်သားသမီးတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့ကိုမျှော်လင့်မသာပေမယ့်သူမကလေး၏ယေဘုယျသာယာဝပြောရေးတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်, အမိန့်နှင့်စည်းကမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်, မေတ္တာနှင့်ကိုယ်ချင်းစာပေး, နှင့်မိသားစုတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်ကျန်းမာသေချာ, ပျော်ရွှင်ပညာရှိဖြစ်နိုင်လျှင်. လိင်နှင့် chastity စပ်လျဉ်းအမျိုးသမီးများဂုဏ်သတင်းအရေးကြီးသောဖြစ်ကြပြီးလိင်ကသူတို့ကိုနှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်စော်ကားမှုရှိခဲ့ကြသူလူတို့သညျအမြိုးသမီးအကြားအတင်းအဓမ္မလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အလေ့အကျင့်ကိုအားပေးဖို့. ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများအမြိုးသမီးမြားကိုကျော်ယောက်ျားမျက်နှာသာ.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကမွန်ကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ်မွန်သင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.